Amabali okusebenza ngokulingana ngokwesini | Uncwadi lwangoku
Amabali okusebenza ngokulingana ngokwesini
Ndinoluvo (ngokuqinisekileyo njengoninzi lwenu), ukuba uluntu ukuba luguquke lungcono okanye lubi luyabulela Imfundo yintoni eyamkelwayo ukusuka kumanqanaba aphezulu osana nditsho awona manqanaba aqolileyo okukhula kwethu.
Imfundo efunyanwa usemncinci ifana nesiseko ekuthi xa sikhula songeze iintsika nakwimigangatho, ethi ngamafutshane, ayonto yanto ngaphandle kwamava ethu obomi. Kodwa ukuba isiseko sokuqala, ukuba loo mfundo ifunyenwe kwiminyaka yokuqala yobomi nguye nawuphi na umntu, ineentanda ezithile, ayisiyongqindilili kwaye yomelele njengoko kufuneka, yonke into esiyibeka phezulu ayinayo inkxaso ethembekileyo neqinileyo.
Ndifuna ukuya phi nale nto? Eli nqaku sisiqingatha sokubonakalisa ingcebiso yesiqingatha yokufunda. Kulungile ukuba abantwana bakhule babe nokuzonwabisa njengabantwana; Kulunge kakhulu ukuba bafunde amabali omlingo apho konke ukukhohlisa kunokwenzeka; kulungile, nokuba, bawafunde la mabali akudala esiwafunde sonke njengabantwana kwaye asenze saphupha kakhulu njengabantu abadala malunga nethuba lokonwaba ngonaphakade, njl. Kodwa ndicinga ukuba kungangcono ukuba abantwana banamhlanje bakhule befunda amabali apho abantwana iinkolelo, kokubini amadoda nabafazi, abakho ... Ukuba unabantwana, ukuba ungutitshalaSincoma ukuba sifunde namhlanje amabali okusebenza ngokulingana ngokwesini. Ngoba? Kuba siqinisekile ukuba xa sifundisa abantwana bethu ngokulingana besebancinci kakhulu, azizukubakho iimeko ezininzi zokuhlukunyezwa, ukuxhatshazwa, kunye nobundlobongela njengoko kusenzeka namhlanje.
Ukuba ucinga ukuba olu luntu lufuna ukujika okungama-360º ngokwemfundo, funda njalo. Unomdla! Kwaye njengevidiyo enomdla kwaye ehlekisayo, ndikushiya uluvo lwentombazana eneminyaka esixhenxe ubudala malunga namakhosazana. Akalunganga?
1 "Ngaba amakhosazana anxiba iibhutsi zokunyuka intaba?"
2 "Nazo iinkosazana zishiyekile"
3 "Ngaba ikhona into enesithukuthezi ngaphezu kokuba yinkosazana epinki?"
"Ngaba amakhosazana anxiba iibhutsi zokunyuka intaba?"
Kwincwadi "Ngaba amakhosazana anxiba iibhutsi zokunyuka intaba?" sichazwe ukuba inamandla, intombazana yanamhlanje kwaye igcwele intombazana yobomi ukuba unemibuzo emininzi ayibuze kunina. Ekupheleni kwencwadi, isakhelo esinemifanekiso ejikeleze isipili siphendula owona mbuzo ubalulekileyo wentombazana.
Ngale ncwadi asikwazi ukuzifundela kuphela kodwa sikwadlulisela kwabancinci isifundo esimnandi malunga nokuzamkela okanye ukuzamkela. Ikwakhuthaza abantwana ukuba baqhubeke namaphupha abo kwaye bazenzele uphawu kwihlabathi, bebakhuthaza ukuba bafune ukuzimela, benze ubuntu babo obomeleleyo nobukhethekileyo, njalo njalo.
Su umbhali es UCarmela lavigna. Yincwadi epapashwe ngu-Editorial Obelisco ngo-2013 kwaye ungayifumana malunga nayo 12 euro malunga.
"Nazo iinkosazana zishiyekile"
Ngesi sihloko sihlekisayo usinika sona Ilan Brenmann le ntsomi. Ipapashwe ngu-Editorial Algar ngo-2011, uLaura omncinci unombuzo obaluleke kakhulu emva kwengxoxo yeklasi ende malunga neCinderella. Umhlobo wabo uMarcelo uvumile kubo ukuba inkosazana edumileyo nebuthathaka yaqaqamba kakhulu. Ngethamsanqa, utata kaLaura, othanda iincwadi kunye namabali amnandi, unencwadi eyimfihlo ka amakhosazana apho uLaura azakufumana iimpendulo kuyo yonke imibuzo yakhe.
Le ncwadi, ikhava eqinileyo, ungayifumana embalwa I-15 okanye i-euro ezingama-16, Kuxhomekeka kwindawo yokuthenga.
"Ngaba ikhona into enesithukuthezi ngaphezu kokuba yinkosazana epinki?"
Le ncwadi yapapashwa ngo-2010 nguMhleli uThule Ediciones, ngu ebhalwe nguRaquel Díaz Reguera. Kuyo, kuchazwa uCarlota, owayeyinkosazana epinki, enxibe ilokhwe yakhe epinki kunye nekhabhathi yakhe egcwele iimpahla ezipinki. Kodwa UCarlota wayegula ngepinki kwaye eyinkosazana. Ndifuna ukunxiba bomvu, luhlaza okanye mfusa, nawuphi na umbala ngaphandle kwepinki. Wayengafuni ukwanga amasele ukuze abone ukuba ngaba ziinkosana ezithandekayo, kuba wayengafuni nokufumana inkosana yakhe enomtsalane, nayo. UCarlota wayehlala ezibuza ukuba kutheni kungekho prinUngathanda ukuhamba ngenqanawa iilwandle ukhangela i-adventure, okanye amakhosazana ahlangule iinkosana ekubanjweni yingcuka enoburhalarhume hayi ngenye indlela njengoko bekusenzeka njalo ... ibhaluni.
Le ncwadi, njengeyokuqala, inokufumaneka ngaphezulu nje kwe-euro ezingama-12.
Kwaye ukuba awunayo ngokwaneleyo kwaye ufuna ukuqhubeka ujonga iincwadi "Abachasene neenkosazana", ezophuka ngokupheleleyo ngamabali aqhelekileyo ahlala exelwa, nazi ngaphezulu kwelinye inqaku endilipapashe kwinyanga ephelileyo.
Njengam, ucinga ukuba ngokutshintsha imfundo kunye nendlela yokufundisa nokudlulisa amabali athile kubantwana bethu, kwixesha elizayo uluntu lwethu lungahluka kakhulu kunamhlanje? Okanye ngokuchaseneyo, ucinga ukuba eyona nto iphambili ikwenye indawo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iincwadi » Amabali ukusebenza ukulingana ngokwesini
Ingxaki yam yile yokulingana ngokwesini kukuba kum abantu basetyhini bangaphezulu, ndenza ntoni? Andiboni ngenye indlela. Ndithatha ithuba ngokubhala: Usuku oluBongayo lweSondlo.
Iincwadi ezi-5 zokufunda le ntwasahlobo